Fitantanam-pitondrana · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fitantanam-pitondrana · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Fitantanam-pitondrana tamin'ny Janoary, 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana14 Janoary 2011
Arakaraky ny itohizan'ny herisetra, dia toy izany koa ny valin-kafatra sy ny fanehoan-kevitra ao Jordana. Maro ireo Jordaniana mpampiasa twitter no nifantoka tamin'ny fanakianana ny Filohan'i Tonizia , Zine El Abidine Ben Ali. Ny hafa mihevitra fa ny korontana mitranga any Tonizia dia hanome hevitra ny vahoaka any amin'ny firenena...
Azia Atsinanana11 Janoary 2011
Mba hanehoana ny fijeren'ny CCP (Antoko Kaominista Sinoa) ny fiainan'ny olon-tsotra, dia nandefa ny fitsidihin'ny Filoha Hu Jintao ny fianakaviana kely fidiram-bola tao Beijing tamin'ny 30 Desambra taona 2010 ny fandaharan'ny tambajotram-baovao CCTV. Na izany aza, ny fifampiresahan'ny Filoha Hu sy i Guo Chunping, nambara fa solotenan'ireo mponina kely fidiram-bola,...
Sodana: Fitsapan-kevibahoaka momba ny fahaleovantenan'ny Sodana Atsimo, ao amin'ny Twitter
Afrika Mainty11 Janoary 2011
Nandeha nandatsa-bato androany (9 Janoary) ireo Sodane mpifidy tmba hanapa-kevitra na hjisintaka na hijanona ihany ho isan'i Sodana. Fehina tweets mikasika ny fitsapan-kevibahoaka ity. Azonareo atao ny manaraka mivantana ireo Tweets amin'ny fampiasàna ny tenifototra #SudanRef.
Rosia: Tetikasa Ushahidi mitatitra ny olan'ny Ririnina Rosiana
Tselatra · Eoropa Afovoany & Atsinanana11 Janoary 2011
Tonizia : “tsy matahotra intsony izahay!”
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana08 Janoary 2011
Mihamanatona ny faran' ny taona fa any Tonizia kosa dia mikorontana noho ny firohotana ara-tsosialy izay heverin'ny mpitoraka bilaogy maro fa hitondra fiovana lehibe eo amin'ny firenena. Noho ny fanivanana ny aterineto sy ny haino aman-jery Toniziana, dia fahazarana ny mampahafantatra sy mikarakara ny fanoherana mandritra ny 13 andro amin'izao...
Afrika Mainty08 Janoary 2011
Misy video mampikorontana ny fiaraha-monina Ivoriana amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao. Ahitàna ny miaramila midaroka gadra - voalaza ho mpomba an'i Alassane Ouattara - ao amin'ny MACA, fonja any Abidjan. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny krizy ara-politia any Cote d'Ivoire, am-polony ireo olona nosamborina tany Abidjan noho ny fironany ara-politika, ary nogadraina...